ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ | OnDoctor
ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို လူတော်တော်များများကြုံတွေ့ဖူးကြပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်တာဟာ အလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာကောင်းပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ အခန့်မသင့်ဘဲ ဝမ်းချုပ်တတ်တာဟာ ပုံမှန်ဖြစ်ပေမယ့် မိမိနေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စတွေ ဆောင်ရွက်ဖို့ကိုပါ အနှောက်အယှက်ပေးလာပြီး ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာဝမ်းချုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကိုယ်သင် သတိထားဖို့လိုနေပါပြီ။
ဝမ်းချုပ်တတ်သူလို့ ဘယ်အချိန်မှာ ယူဆလို့ရမလဲ?
တစ်ပတ်ကို ဝမ်းသုံးကြိမ်ခန့်သာ အများဆုံးသွားခြင်း။
ဝမ်းသွားနေချိန် စအိုလမ်းကြောင်းတွင် တစ်ခုခုပိတ်နေသည်ဟု ခံစားရခြင်း၊ ဝမ်းသွားရ မဝခြင်း။
ဝမ်းမကုန်သလို ခံစားရ၍ လက်ချောင်းနှင့် စအိုဝကို ကလော်ပြီး မစင်တုံးကို ထုတ်ရခြင်း။
လွန်ခဲ့သော သုံးလခန့်ကတည်းက အဆိုပါလက္ခဏာတွေ အနည်းဆုံးနှစ်ခု ခံစားနေခဲ့ရတယ်ဆိုရင် ဝမ်းချုပ်တယ်လို့ ယူဆလို့ရနေပါပြီ။
ဘာကြောင့် သည်လို ဝမ်းချုပ်နေရတာလဲ?
ဝမ်းချုပ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ဝမ်းချုပ်နေနိုင်လောက်တဲ့ အကြောင်းအရင်း တစ်စုံတစ်ခု သို့မဟုတ် ရောဂါအခံတစ်ခုခု ရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ စအိုအနာရှိခြင်း၊ အူလမ်းကြောင်းတွင် တစ်ခုခု ပိတ်နေခြင်း(အူမကြီးကင်ဆာ Colon Cancer ၊ သို့မဟုတ် အခြေအနေတစ်ခုကြောင့် အူလမ်းကြောင်း ကျဉ်းသွားခြင်း၊ ခွဲစိတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အူပိတ်ခြင်း၊ ကပ်ခြင်း Adhesive intestinal obstruction )၊ အာရုံကြောနှင့် ဆိုင်သော ရောဂါများ (လေဖြတ်ခြင်း stroke၊‌ ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီးကို ထိခိုက်မိဖူးခြင်း spinal cord injury)၊ တင်ပဆုံကြွက်သား အားနည်းခြင်း၊ ဆီးချို‌နဲ့ ဟော်မုန်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေမှာ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါ‌‌ပေမယ့်သည်‌ရောဂါတွေဟာ ဝမ်းချုပ်တာတစ်ခုထဲမဟုတ်ဘဲ တစ်ခြားလက္ခဏာတွေပါ တွဲတတ်ပါတယ်။ လူအချို့ကတော့ အကြောင်းအရင်းရှာမရဘဲ ဝမ်းချုပ်တတ်ကြပါတယ်။
ဝမ်းချုပ်တတ်သူတွေမှာ နောက်‌ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေက အမြဲရှိစမြဲပါ။ ဘာတွေလဲဆိုရင်
လိပ်ခေါင်းရောဂါဆိုတာ သွေးကြောတွေဖောင်းလာရာကနေ ဖြစ်လာတာပါ။ ဝမ်းမထွက် ထွက်အောင် အားစိုက်ညှစ်ရတဲ့အတွက် စအိုနံရံအနီးတစ်ဝိုက်က သွေးပြန်ကြောတွေ ဖောင်းလာပြီးလိပ်ခေါင်းဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့သည်လိုဖြစ်လာရင် ဝမ်းသွားချိန်မှာ သွေးအ‌ရောင်ရဲရဲတွေပါလာတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
စအိုကွဲနာရောဂါ (Anal Fissure)
ဝမ်းချုပ်လေ့ရှိတာကြောင့် ဝမ်းမာပြီးအားစိုက်သွားရတဲ့အတွက် စအိုအ‌ရေပြားကွဲထွက်ခြင်း၊ အနာဖြစ်ခြင်း တို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဝမ်းသွားနေတဲ့အခါ စအိုအဝက နာနေတတ်ပါတယ်။
အူလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်း (Intestinal Obstruction)
ကြာရှည်ဝမ်းမသွားနိုင်တဲ့ အခါ အူလမ်းကြောင်းမှာ မသွားနိုင်‌တဲ့ ဝမ်းကျန်နေပြီး ပိတ်ဆို့နေတာပါ။ အဲ့သည်လို အချိန်မှာ အန်ခြင်း၊ ဗိုက်အလွန်နာခြင်း၊ ဗိုက်ဖောင်းလာခြင်း တွေပါကြုံတွေ့နိုင်ပြီး ခွဲစိတ်ကုသရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အူကျွံခြင်း (Rectal Prolapse)
ဝမ်းကို အားစိုက်ညစ်ရတဲ့အတွက် အူနံရံတွေကိုဆွဲဆန့်သလိုဖြစ်ပြီး စအိုဝကနေကျွံထွက်လာတာမျိုးပါ။
အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးဝလံ၊ ပဲအမျိုးမျိုးကို များများစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
မာသောအစားအစာ၊ အသားအလွန်အကျွံ စားသုံးခြင်းကိုရှောင်ပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းနေ့စဉ် ပုံမှန်လုပ်ပါ။ တက်ကြွလန်းဆန်းနေခြင်းဟာ ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
ဝမ်းသွားရန် အချိန်သတ်မှတ်ပေးပါ။ သည်လိုသတ်မှတ်ထားတာကြောင့် ဝမ်းသွားဖို့မမေ့တော့ဘဲ ပုံမှန်ဝမ်းသွားတဲ့အတွက် ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
ကာကွယ်ခြင်းဟာ ကုသခြင်းထက်ပိုမိုထိရောက်တာကြောင့် ဝမ်းချုပ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ မဖြစ်ပေါ်အောင် မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။